अर्थतन्त्रमा हुर्किरहेका विसंगति - Karobar National Economic Daily
अर्थतन्त्रमा हुर्किरहेका विसंगति
query_builderJanuary 16, 2017 12:02 PM supervisor_accountडा. गोविन्दबहादुर थापा visibility1442
अन्त्यहीन राजनीतिक विवाद र द्वन्द्वका कारण नेपालमा विकासका अनगिन्ती स्रोत बिनाउपयोग लाजमर्दो किसिमले खेर गइरहेका छन् । विकासका यस्ता उत्पादक शक्तिहरूमध्ये सानो अंश मात्र उपयोग भएको छ ।
यस्ता साधनको ठूलो मात्रामा दुरुपयोग पनि भइरहेको छ । वनका काठ र नदी, खोलाका ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवामा वर्षांैदेखि लुटान चलिरहेको छ । छिमेकमा यस्ता सामग्रीको माग असीमित रहेको पाइन्छ भने नेपालभित्रैको निर्माणकार्यमा पनि यी सामग्री अपरिहार्य छन् ।
त्यसैले यस्ता महत्वपूर्ण निर्माण सामग्रीहरूको नियन्त्रण, जगेर्ना, व्यवस्थापन र उपयोगका निमित्त राज्य गम्भीर हुनुपर्ने होइन ? यस्ता महत्वपूर्ण नदीजन्य उत्पादनको चोरी–निकासीका समाचारहरू लगातार सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन्, तर सरकारले त्यसप्रति बिल्कुल चासो दिएका छैन ।
नियमनका लागि राखिएका सरकारी कर्मचारीहरू स्वयम् पनि कतिपय सन्दर्भमा यस्तो भोरजुवामा संलग्न हुने गरेका छन् । यसरी देशका महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा दुई नम्बरीहरूको कब्जामा परेको छ । केही वर्षअघि एक जना फिलिपिनो वन विशेषज्ञले नेपालको वनको अध्ययन गरिसकेपछि भनेका थिए— नेपालको वनलाई वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थित र उपयोग गर्ने हो भने यसले देशलाई चाहिने सम्पूर्ण राजस्व दिन सक्छ ।
उनी भन्थे— नेपालले वनको महत्व बुझेकै रहेनछ । अर्कातिर हामीले बर्सेनि ठूलो परिमाणमा विदेशबाट काठ आयात गर्दै आएका छौं । काठ मात्र होइन, हाम्रा उच्च हिमाली पहाडहरूले अनगिन्ती किसिमका बहुमूल्य जडीबुटी पनि उमार्छन् । त्यस्ता जडीबुटी सही मानिसको हातमा पर्ने हो भने राज्य र जनताको आयका महत्वपूर्ण स्रोत हुन सक्छन् ।
तिनले देशको समृद्धिमा उल्लेख्य योगदान पु¥याउन सक्छन् । तर, यो क्षेत्र पनि पूरै उपेक्षित भएर रहेको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने यो क्षेत्र अवैध धन्दा गर्नेहरूका निमित्त सुनखानीसरह भएको छ । यिनको जगेर्ना, वैज्ञानिक र व्यावसायिक खेती तथा उचित व्यवस्थापनका लागि अझ कति कुर्नुपर्ने हो, थाहा छैन ।
निजी क्षेत्र लगानी विस्तार गर्न जमजमाएर बसेको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यतिखेर तरलताको अभावमा निजी क्षेत्रको मागबमोजिम कर्जा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन् । यी संस्थामा जम्मा हुन आउने निक्षेप भन्दा कर्जा प्रवाह बढी हुने गरेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ठूल्ठूलो अंकको नगद भुक्तानी दिन असमर्थ भएका छन् ।
लामो समयसम्मको चर्को लोडसेडिङको पीडाबाट अर्थतन्त्र बल्ल–बल्ल मुक्त हुन लागेका बेला निजी क्षेत्रलाई मागबमोजिम कर्जा उपलब्ध गराउन सक्नुपर्ने थियो, तर यतिखेर नै बजारमा तरलताको अभाव भएकाले निजी क्षेत्र व्यवसाय विस्तारमा कुण्ठित भइरहेको छ ।
अर्कातिर राज्य जनताबाट संकलन गरिएको कर राजस्व र अन्य स्रोतबाट संकलित वित्तीय साधन खर्च गर्न नसकेर थुपारेर बसिरहेको छ, अर्थात् अर्थतन्त्रमा कस्तो स्थितिको सिर्जना भएको छ भने राज्य जनताबाट राजस्व मात्र तानिरहेको छ, तर खर्चमार्फत अर्थतन्त्रमा पैसा प्रवाह गरिरहेको छैन ।
त्यसले गर्दा राज्यस्तरबाट हुनुपर्ने विकासका काम त हुन सकिरहेका छैैनन् नै, त्यसबाट अर्थतन्त्रमा नगदको अभाव भएर निजी क्षेत्र समेत खुम्चिएर रहनुपरेकोे छ । यो नेपालको अर्थतन्त्रका निमित्त विडम्बनापूर्ण र दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । कुनै पनि वस्तुको अधिक आपूर्ति हुँदा त्यसको मूल्य र महŒव घट्ने मात्र होइन, त्यसको दुरुपयोग वा अपव्यय पनि हुन्छ भन्ने अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तअनुसार राज्यकोषमा अधिक रकम थुप्रिएकाले सरकार अनावश्यक प्रयोजनमा त्यसको खर्च गरिरहेको छ ।
त्यो एक हिसाबले दुरुपयोग वा अपव्यय हो । यस क्रममा कतिपय क्षेत्रमा राज्यलाई दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने गरी खर्च भएका छन् । यसले भविष्यमा समेत अप्ठ्यारो पार्नेछ । यसरी देशमा महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको मात्र होइन, सरकारको स्वामित्वमा आएको वित्तीय साधनको समेत उत्तिकै अनुपयोग र दुरुपयोग भइरहेको छ ।
उता वित्तीय साधनको अभावमा काम गर्न खोज्नेहरूले काम गर्न पाइरहेका छैनन् । यस्तो विचित्रको स्थिति यतिखेर नेपालमा सिर्जना भएको छ । यो स्थिति सरकारको प्रभावहीनताको अनुपम उदाहरण हो । यो चरम खालको आर्थिक विसंगति हो । यस्तो स्थितिमा सरकारको हस्तक्षेप खोइ ? सरकारले आफू अस्तित्वमा रहेको अनुभूति दिलाएको खोइ ?
के यस्ता विसंगतिहरू सच्याउनै नसकिने खालका हुन् ? बिल्कुल होइनन् । यो त अज्ञानता, निष्क्रियता र पहल कदमीको अभावको परिणाम हो । अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीमा नियुक्त गरिएका व्यक्तिहरूको अनाडीपनको परिणाम हो । जसले र जस्ताले पनि जिम्मेवारी पाएपछि जे र जस्तो काम पनि गर्न सक्छन् भन्ने गलत धारणाको परिणाम हो ।
देशमा कायम रहेको यस्तो प्रवृत्तिबाट देशको अर्थतन्त्र कुनै पनि बेला दुर्घटनामा पर्न सक्छ, किनभने सरकारले अर्थतन्त्रमा झाङ्गिँदै गएका विसंगतिहरू पहिचान गर्ने र तिनलाई समयमै हस्तक्षेप गरेर सच्याउने ल्याकत देखाइरहेको छैन । यो दुःखद स्थिति हो ।
अर्कातर्फ विराटनगरका किसानहरू धान बिक्री हुन नसकेर छटपटाइरहेका समाचार आइरहेका छन् भने सिराहा, सर्लाही, महोत्तरी, बारा, रौतहट, नवलपरासी आदि जिल्लाका उखु किसानहरू समयमा उखुको मूल्य निर्धारण नभएर पुर्पुरोमा हात राखेर बसिरहेका समाचार आइरहेका छन् ।
यो वर्ष नेपालमा रेकर्ड स्तरमा धान उत्पादन भएको भनिएको छ । र, त्यो धानको उत्पादन लागत बढी भएकाले किसानहरूले लागतअनुसार धानको मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । उता सरकार भने ती किसानको पीडाप्रति मूकदर्शक बनेर बसेको छ । सीमापारिबाट न्यून उत्पादन लागतका कारणले सस्तो भएको धान–चामल आयात भइरहेको छ ।
उखु किसानहरूको अवस्था योभन्दा खराब छ । खेतमा उखु सुक्ने अवस्थामा पुगिसक्दा पनि कतिपय जिल्लामा उखुको मूल्य अझै निर्धारण गरिएको छैन । विसंगतिको यो अर्को नमुना हो । राज्यले हाम्रो धान, गहुँको उत्पादन लागत सके सीमापारिभन्दा कम र नसके पनि कम्तीमा समान हुने नीति लागू गर्न किन सकिरहेको छैन ? कि यसमा पनि उताको दबाब छ ?
अब यी धानखेती गर्ने किसान र उखु किसान के आधारमा कृषिकार्यमा रहने ? अनि परिवार पाल्न यिनका हुर्केका भाइ, छोरा वैदेशिक रोजगारीमा नगएर के गर्ने ? खेती गर्दा लागेको ऋण कसरी तिर्ने ? यस्तो अवस्था छ ।
कुनै पनि वर्षको लक्षित आर्थिक विकासदर हासिल गर्न आवश्यक हुने तरलता उपलब्ध गराउने ऐनमा उल्लिखित नेपाल राष्ट्र बैंकको उच्च प्राथमिकतामा रहेको काम हो । तर, विडम्बना के देखिएको छ भने राष्ट्र बैंक भन्छ—अर्थतन्त्रमा तरलताको अभाव छैन, तर बैंकरहरू भनिरहेका छन्, तरलताको अभावका कारण मागबमोजिम कर्जा प्रवाह गर्न सकिएको छैन ।
बजारमा तरलता छ–छैन भन्ने कुरा पनि केन्द्रीय बैंक र बैंकरहरूबीच विवाद हुनुपर्ने विषय हो र ? यस्तो विवाद नेपाल राष्ट्र बैंकको झन्डै ६० वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक देखा परेको छ । राष्ट्र बैंक रिपोका लागि उपलब्ध गराइएको रकमको सानो अंश मात्र बैंकहरूले लैजाने गरेको र बैंकहरूको पुँजी र निक्षेपको योगबाट कुल प्रवाहित कर्जा र अनिवार्य नगद मौज्दातको योग घटाएपछि बाँकी रहने रकम उल्लेख्य भएकाले बजारमा तरलताको अभाव छैन भनिरहेको छ भने बैंकरहरू आफूसँग नगदको अभाव भइरहेको र निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदा पनि निक्षेप जम्मा हुन आइरहेको छैन भनिरहेका छन् ।
सैद्धान्तिक दृष्टिले यी दुवै पक्षका आ–आफ्ना भनाइ ठीक छन् । तर पनि बैंकहरूमा तरलता नभएको कुरा त यथार्थ हो नि ! तसर्थ बजारमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउने दायित्व पनि केन्द्रीय बैंककै हो र अर्थतन्त्रको मागबमोजिम तरलताको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी पनि केन्द्रीय बैंककै हो ।
बैंकिङ क्षेत्र केवल सरकारले पैसा खर्च नगरिदिएकाले यो स्थिति आएको हुनाले सरकारले खर्च बढाउनुपर्छ भनेर सरकारमाथि जिम्मेवारी थोपरेर मात्र रहन मिल्दैन । अर्थतन्त्रमा आवश्यक मात्रामा तरलता निरन्तर रूपमा उपलब्ध भइरहनुपर्छ । यो नै बटम लाइन हो ।